वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका ६ वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश दिन सक्ने क्षमता कति ? – Insurance Khabar
वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका ६ वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश दिन सक्ने क्षमता कति ?
प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७६, मंगलवार १३:४२
हाल संचालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ६ वटा वाणिज्य बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५/७६को चौथोे त्रैमासकोे वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
वितरण योग्य मुनाफा:
वितरण योग्य मुनाफाको आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्मको अवधिमा ६ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै वितरणयोग्य मुनाफा ग्लोबल आईएमई बैंकको रहेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको वितरण योग्य मुनाफा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरीे प्रभु बैंकको वितरण्योग्य मुनाफा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सानिमा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल एसबीआई बैंकको वितरणयोग्य मुनाफ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छे बैंकको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका ६ वटा वाणिव्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी लाभांस दिन सक्ने क्षमता ग्लोबल आइएमएई बैंकको रहेको छ । बैंकको शेयरधनीलाई २३ दशमलव ५७ प्रतिशत लाभाश दिन सक्ने क्षमता रहेको छ ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकको लाभांश दिन सक्ने क्षमता १९ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । माछापुच्छे बैंकको १६ दशमलव ३९ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने क्षमता रहेको छ । सिटिजन्स बैंकको १३ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको १८ दशमलव ९० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने क्षमता रहेको छ र सानिमा बैंकको २० दशमलव ३२ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने क्षमता रहेको छ ।
कम्पनीको वितरण योग्य मुनाफा कम्पनीले शेयर धनीलाई लाभांसको रुपमा बाड्न सक्छ ।